Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Ny American Hotel and Lodging dia miarahaba ireo torolàlana momba ny sarontava CDC vaovao
Ny torolàlana momba ny sarontava CDC dia nankasitrahan'ny AHLA
Ny torolàlana momba ny saron-tava CDC farany teo ho an'ny Amerikanina vita vaksiny izay manafatra fetra manarona ny tarehy dia neken'ny Amerikana Hotely sy ny Fikambanan'i Lodging izay nilaza fa tokony hanampy haingana ny fanarenana tena ilaina izany.
Ny torolàlana momba ny Safe Safe an'ny AHLA dia hampihena ny fepetra takiana amin'ny saron-tava ho an'ireo vahiny vaksiny feno.
Tsy mangataka trano fandraisam-bahiny izy ireo mba hitaky porofo momba ny satan'ny fanaovana vaksiny fa mangataka ny hanajan'ireo vahiny sy hanome torolàlana nohavaozina.
Ireo vahiny tsy vita volo dia tokony hisaron-tava mandrakariva ary hanao fanazaran-tena amin'ny halaviran'ny vatana.
Ity manaraka ity dia fanambarana iray avy amin'i Chip Rogers, filoha sady tale jeneralin'ny American Hotel & Lodging Association, momba ny torolàlana momba ny fisaronana endrika sy ny fanalavirana ny vatana avy amin'ny Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
“Toy ny Amerikanina rehetra, faly izahay hiverina amin'ny fiainana ara-dalàna, izay misy ny dia. … Amin'ny maha indostria anay dia ny fiarovana ny vahininay sy ny mpiasa hatrany no zava-dehibe indrindra amintsika. Niakatra tamin'ny fanambin'ny krizy ara-pahasalamam-bahoaka ny trano fandraisam-bahiny tamin'ny alàlan'ny Safe Stay, hetsika ho an'ny fahasalamana sy fiarovana amin'ny sehatry ny indostria napetraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny AHLA. Nandritra ny areti-mandringana dia nitohy nivoatra hatrany ny torolàlana Safe Stay mba hifanaraka amin'ny tontolo iainana sy ny torolàlana CDC ankehitriny, ary ho toy izany koa rehefa miasa hisokatra isika.
"Manoloana ny fanambarana nataon'ny CDC tato ho ato olona vita vaksiny tanteraka tsy izay intsony mila manao sarontava na ny halavirana ara-batana amin'ny ankamaroan'ny toerana, ny torolàlana Safe Stay anay dia hampiala sasatra ny takiana amin'ny sarontava ho an'ny vahiny vaksiny feno. Amin'izao fotoana izao dia tsy mangataka trano fandraisam-bahiny izahay mba hitaky porofon'ny maha vaksiny azy ireo, fa kosa angatahinay ny vahiny sy ny mpiasa rehetra, nanao vaksiny na tsia, hanaja sy hanaja ireo torolàlana nohavaozina ireo. Ireo vahiny tsy vita volo dia tokony hisaron-tava mandrakariva ary hanao fanazaran-tena amin'ny halaviran'ny vatana.